Khudbadihii madaxda ee xafladda caleemasaarka madaxweynaha Galmudug oo socota – Radio Muqdisho
Xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa maanta ka socota magaalada Cadaado, waxaana goob jog ka ah madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Xafladda oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa madaxda ka qeygaleysa waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan baarlamanka Soomaaliya.
Sidoo kale xafladda caleemasaarka oo hadda ka socota Cadaado waxaa goob ka ah madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamulka Qaatumo Cali Qaliif Galeyr, gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungaab, madaxda bulshada rayidka ah, odayaal dhaqameedyo Soomaaliyeed iyo martisharaf kale.
Hobollada fanaaniinta Qaranka ee Waaberi iyo abwaaniin caan ka ah dalkeena ayaa halkaasi ku soo bandhigay sugaan waddani ah oo dhaxalgal ah, kana tarjumeysa qiimaha dhismaha maamulkaasi iyo baahida loo qaabo inuu la yimaado waxqabad loo aayo.
Hadda waxaa socda khudbadihii madaxda ka qeybgaleysa xafladaasi lagu caleemasaarayo madaxweeynihii ugu horreeyay ee maamulka Galmudug mudane C/kariin Xuseen Guuleed.
Xafladda waxaa hadda si toos ah u tebinaya Radio Muqdisho iyo Telefishinka SNTV.
Barlamanka Galmudug wuxuu ka shaqeyn doonaa wadahadalada Ahlusunna iyo Galmudug.